I-Visa's Sign-On Checkout eyodwa iwinile! | Martech Zone
ULwesithathu, May 20, 2015 ULwesibili, May 19, 2015 Douglas Karr
Ukungena ngemvume okukodwa kufakazelwe ukuthi kuyasebenza kulo lonke ibhodi - kungaba ukusebenzisa ukungena kwezenhlalo ukuqedela amafomu ekhasi lokufika, noma manje ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokukhokha ukuguqula ikhasimende ngokushesha. IVisa inikeza uphawu olulodwa kusistimu ebizwa I-Visa Checkout lokho sekuvele kunokwamukelwa okubanzi.
Ngokukhula okusheshayo ezinyangeni eziyi-10 ezedlule, i-Visa Checkout ibone amazinga amakhulu okutholwa nezingxoxo. Bazobe beqala imikhankaso emikhulu yokubambisana nokukhangisa kuleli hlobo. Kuze kube manje, basebenze kahle kakhulu embonini, noma kunjalo.
Ama-akhawunti wamakhasimende ayizigidi ezi-4
Bangaphezu kuka-125,000 abathengisi abakhulu nabancane
Abalingani bezikhungo zezezimali abangama-260
Ocwaningweni lwakamuva lwe-comScore (bona ngezansi), kwembulwe ukuthi abathengisi be-Visa Checkout babone i- isilinganiso sokuguqulwa esingu-69% sabasebenzisi abakhona ukuthenga. Lokhu kungamaphesenti angama-66% kunamanani okuguqula abikiwe ngokuphuma kwendabuko ku-inthanethi
I-oda elijwayelekile elibekwe ne-Visa Checkout beliphezulu ngamaphesenti ayi-7% kunama-oda abekwe kumasayithi okuthengisa nawokuhamba ngezinye izinketho zokukhokha. Umbiko ohlukile kaMillward Brown uthole ukuthi amaphesenti angama-95% wamakhasimende eVisa Checkout athe ukubhalisa kwakulula futhi u-96% uthe ngazizwa ngilondekile ukuyisebenzisa.
IVisa nayo izobe ibalulekile emikhankasweni yokumaketha neyokukhangisa ezoqala ehlobo.
Tags: izinkokhelo onlineukukhokha inkokhelouphawu olulodwa luvuliweI-visaukuphuma kwe-visa
Izinto ezi-4 zokuDrayivu ezihola phambili nge-Marketing Automation